रूसी भाषा क्षण भाषाहरु मा फरक, र कहिले काँही पनि "मरेको" बाट आउनुभएका धनी phraseology छ। तिनीहरूलाई थुप्रै मौलिक इतिहास को पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने महत्वपूर्ण घटनाहरू सम्बन्धित छन्। ल्याटिन वाक्यांश "को Rubicon पार" कुनै अपवाद छ। गायस Yuliya Tsezarya - पहिलो पटक यो रोमन साम्राज्यको सबैभन्दा ठूलो मानिसहरू मध्ये एक को ओठ बाट सुनिन्थ्यो।
शब्द को ऐतिहासिक अर्थ "Rubicon"
Rubicon - यो के हो? जानकारीको लागि खोज समयमा बाहिर जान्छ यो एक नदी छ, कि इटाली स्थित। एक पटक यो दुई देशहरू बीच उत्तरी cordon एक प्रकारको रूपमा सेवा एक समय मा - रोमी साम्राज्यको र Cisalpine गालमा, आफूलाई बीच लडे। सीनेट लागि आफ्नो शानदार विजय एक वास्तविक खतरा भयो पछि legionaries को टाउको थियो सीजर। सीनेटर, तिनीहरूले साम्राज्य माथि शक्ति गुमाउन सक्छ भनेर थाह पाउँदा, उहाँलाई फिर्ता रोम जान forbade। Yuliy Tsezar, विजेता र पराजित स्वीकार गर्दैन, आफूलाई तिर एक यस्तो मनोवृत्ति सहनु सकेन गर्न accustomed, त्यो Taboo तोड्न र Rubicon पार गर्ने निर्णय गरे। विश्वासी र वफादार योद्धाहरू थप एक दर्जन लडाई भन्दा, आफ्नो नेतृत्वको अन्तर्गत जित्यो गर्ने, रोम जित्न उसलाई पछि भयो। तिनीहरू केवल यो प्रतिरोध हुनेछ भन्ने स्पष्ट भए जस्तै शहर प्रवेश गरेका थिए। सीनेटर आफ्नै सुरक्षा बारे चिन्तित, लगभग एक लडाई बिना शहर दिइएको छ, तर साम्राज्य र यसलाई Yuliyu Tsezaryu आफ्नो शक्ति केही लड गर्न थियो। "लाल नदी" (शब्द "Rubicon" को अनुवाद) जा रोमन साम्राज्यको ठूलो सम्राट रूपमा नयाँ जीवनको शुरुवात को कमान्डर भयो, मानिसजातिको इतिहास सधैंभरि आफ्नो नाम महिमा।
मिति गर्न, Rubicon नदी (अब Fiumicino) छैन, पूर्ण-बहने धेरै शताब्दीयौंदेखि पहिले जस्तै छ। यो नक्सामा अब अवस्थित छैन। तसर्थ, माथि 20 औं शताब्दीको 30 सेकेन्ड, Yuliya Tsezarya को Rubicon समय फेला पार्न सकेन। Savignano Sul Rubicon - च्यानल पोखिन्छ एक लामो अध्ययन पछि, माटो, विभिन्न ऐतिहासिक स्थान सन्दर्भहरू, त्यो आधिकारिक नजिकै शहर को नाम को भाग भयो जो नाम, फर्के को स्केचहरू हेर्न।
अब यो उत्तर पोर्टो शहर को, को Adriatic सागर मा फोहोर पानी वहन जो सानो र inconspicuous धारा छ। आज, Rubicon बारेमा प्रश्न प्रतिक्रिया - कि छ, स्थानीय बस चुपचाप साइन पुल गर्न प्रवेश मा कुरा।
"Rubicon" को लागि आधुनिक पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस्
तपाईं शब्द "Rubicon", सही शब्द "जोखिम" को लागि आधुनिक जनक समकक्ष खोज्न भने। केही निराशाजनक चरणमा साहसी, मानिस एक विशेष लक्ष्य हासिल गर्न सबै छोड्न तयार छ। तर यो सधैं मामला छ - त्यहाँ मानिसहरू वाक्यांश "एक महान कारण, जोखिम" छ। उसलाई आवश्यक जायज लागि हुन जस्तो, गायस Yuliy Tsezar, 100% मा आफ्नो कार्य पक्का हुन, त्यसैले तपाईं सबैलाई र सबै मा दिन छैन अप। अर्को शब्दमा, Rubicon बारेमा प्रश्न - यो, यो एक जोखिम छ जवाफ गर्न सकिन्छ, र यो साँचो हुनेछ।
प्रत्येक आफ्नै गर्न Rubicon
आफ्नो जीवनमा हरेक व्यक्ति कम्तिमा एक पटक एक विकल्प बन्नेछ। प्रारम्भिक बाल्यकाल देखि, हामी रंग, फेसन, संगीतको लागि चक को रंग, Pencils निर्धारित छ। केही सामान (उपकरण, समतल वा घर) लगानी खरीद, जीवन, काम, छोराछोरीको नाम मा साझेदार: वयस्क जीवनको मा, विकल्प धेरै गाह्रो हुन्छ। तपाईं आफ्नो हरेक कार्य, बोली शब्द को लागि जवाफ छ।
हामी के सबै भन्दा राम्रो छ र के छैन निर्णय छ। स्थिर चक्र र bustle चूसना। केही खुसी छैन। त्यसपछि सीमा आउँछ, र तपाईं स्थायी र irreversibly, मौलिक परिवर्तन गर्न केही गर्न आवश्यक छ। एक उज्ज्वल भविष्य, वा खैरो, र यति नरमाइलो लाग्यो अब भविष्यमा मात्र यो बढन हुनेछ - व्यक्तिगत, आफ्नो समय मा Yuliy Tsezar, यो एक विकल्प छ? यी दुई Opposites हल गर्न धेरै गाह्रो छ जो केवल एक कदम, साझेदारी गरिन्छ।
पुग्न माध्यम - Rubicon पार कुनै प्रतिफलको बिन्दु। बस अगाडि, किनभने पहिले जस्तो, रहनेछैन, कुनै कुरा बाटो हुन सक्छ कसरी कठिन जाने छ। त्यसैले, यस्तो कार्य निर्णय मा, तपाईं हरेक विस्तार मार्फत सोच्न आवश्यक, सबै सम्भव परिदृश्य विचार र त्यसपछि सबै बाहिर बारी हुनेछ। शब्द "Rubicon", एक सीमा वा सीमा, बस यस निर्णायक चरण को सङ्कल्प लागि उपयुक्त रूपमा व्याख्या गरिएको छ मान जो। मुख्य कुरा हो - कि इच्छा र आकांक्षा थियो। त्यसपछि मात्र संभावना नाटकीय इच्छित वृद्धि हासिल गर्न हुनेछ।
वाक्यांश आधुनिक मोड संग "को Rubicon पार"
तपाईं मुद्दा, को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान भने "को Rubicon - त्यो छ," आधुनिक बोलीमा, तपाईं अब साधारण जो र सबै भन्दा अक्सर प्रयोग गरिन्छ अभिव्यक्ति, को अर्थ भित्र समानता धेरै पाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, "केही ventured - प्राप्त केही", "सिंक वा पौडिनुहोस्" र अरूलाई। धेरै चलचित्र मा, प्रसिद्ध मान्छे को वचनहरू अक्सर जोखिम विषय लगाया।
"को Rubicon पार", यो महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो विकल्प लागि जिम्मेवार छ कि छ भूल छैन। योजना कुरा अचानक ठाउँ लिन छैन भने, दोष हुनेछ केवल उहाँले, र अरू कसैले।
Solovetsky विहार विद्रोह: एक संक्षिप्त इतिहास
विस्काउंट - यो शीर्षक ... मूल
ब्याटलसीपखेल Gangut: वर्णन, इतिहास, कमान्डरहरु र रोचक तथ्य
"मीन गर्ल्स": अभिनेता र चलचित्र सुविधाहरू
कसरी चिसो मा दाखको बोट राख्न: को जाडो आश्रय लागि अङ्गुर
WWII को प्रमुखहरूलाई: सूची। को marshals र WWII को प्रमुखहरूलाई
फिल्म को अभिनेता "छिटो र अति क्रुद्ध 7", बिना पावलले वाकर फिलिमहरु वा कसरी बनाउने
अवधारणा, सुविधाहरू, विशेषताहरु, संरचना र सामाजिक मनोविज्ञान मा सानो समूह को प्रकार
स्पास्टिक संबंधी बृहदांत्रशोथ